Ungabelana njani ngeendawo zokundwendwela kwiiMaphu zikaGoogle | I-Androidsis
Ungabelana njani ngeesayithi kwiimephu zikaGoogle
Amashishini, afana neeresityu okanye iivenkile, afumana ubukho obuninzi kwiiMephu zikaGoogle. Isicelo sifuna ukuba kukho unxibelelwano nabathengi. Ke ngoko, kangangeenyanga sinako thumela imiyalezo kumashishini usebenzisa iapp. Ukongeza, sinokusebenzisa usetyenziso kwi-Android njengendlela yokuhlala sisazi ukunyuswa okutsha okanye izithembiso ezikwishishini elithile, usebenzisa umsebenzi olandelayo. Nangona kukho imisebenzi engakumbi malunga noku.
Kungenxa yoko, kunokwenzeka ukuba wabelane ngeendawo kunye nabahlobo bakho kwiiMephu zikaGoogle. Ke unokucebisa ngendawo yokutyela ethile kubahlobo bakho okanye ukhethe phakathi kweendawo ezininzi zokuya kwisidlo sangokuhlwa xa udibana nabo. Ngamafutshane, imisebenzi onokuyisebenzisa ngalo lonke ixesha.
Eli nqaku lifakiwe kolunye lwezona zihlaziyo zakutshanje kwi-app. Ke ngoko, ukuba unayo iapp ehlaziyiweyo, uya kuba nakho ukusebenzisa lo msebenzi wokwabelana kuyo. Oku kuyakuvumela ukuba ucebise iisayithi kubahlobo, ukuba bakhe bakubuza ukuba mabaye phi. Kananjalo ukuba iqela labahlobo lifuna ukuya kwindawo, banokuvota ngalo lonke ixesha. Ungayisebenzisa ngalo lonke ixesha.
1 Yabelana ngeziza kwiimephu zikaGoogle
2 Yabelana ngeendawo ezininzi kwiiMaphu zikaGoogle
Yabelana ngeziza kwiimephu zikaGoogle
Ukwenza oku, Kuya kufuneka ufake iprofayile yeshishini elithile kwiimephu zikaGoogle. Yiba ibhar, irestyu, ivenkile, njl. Kwiprofayili / kwifayile yeli shishini sifumana lonke ulwazi olubalulekileyo malunga nalo. Ngokucofa kule thebhu, siza kufumana uthotho lwezinto onokukhetha kuzo. Olunye ukhetho esinokukhetha ukuba sabelane ngalo, olunamaqhosha asezantsi kule thebhu.
Ke ngoko, sicofa kuyo kwaye siza kwenza njalo ukuze ukwazi ukukhetha indlela oza kwabelana ngayo. Singabelana ngayo nabafowunelwa esinabo kwifowuni. Kananjalo nabafowunelwa esinabo kwiiapps ezinje ngeWhatsApp okanye iTelegram, kunye namanye amaqonga anjengeGmail okanye iFacebook. Ngenxa yoko sikhetha abantu kunye nendlela esabelana ngayo kule ndawo.
Ke loo mntu uya kufumana umyalezo aza kuthi abenakho ukubona ukuba sincoma le ndawo, ngalo msebenzi wokwabelana kwiiMephu zikaGoogle. Kulunge kakhulu ukuyisebenzisa ngale ndlela, ngakumbi ukuba umntu ufuna ukwazi malunga nendawo ethile okanye ekhangela idatha yayo, njengedilesi yayo. Le ndlela, unokufikelela kuyo yonke idatha kwindawo ekuthethwa ngayo.
Nangona kukho iindlela ezininzi zokusebenzisa inqaku lokwabelana kwiiMaphu zikaGoogle.
Yabelana ngeendawo ezininzi kwiiMaphu zikaGoogle
Kuba kunokwenzeka ukuba ufuna ukucebisa uthotho lweendawo kubahlobo bakho abathile, ukuba umzekelo baya kwisixeko esithile ukutyelela ukuba wazi kakuhle. Ke ubaxelela ukuba zeziphi iivenkile zokutyela ekufuneka bezityelele ngawo onke amaxesha ewe okanye ewe. Ungawusebenzisa lo msebenzi kwiiMephu zikaGoogle ngale njongo ngendlela elula.
Xa uyinike isabelo kwindawo yokutyela yokuqala, ikusa kwiscreen sesibini apho unokukhetha khona abafowunelwa. Uya kubona ukuba kwiscreen, embindini, ufumana imifanekiso emibini. Inye enendawo yokutyela okanye indawo ekuthethwa ngayo. Ngelixa yesibini kukwabelana ngeesayithi ezininzi. Olu khetho onokulusebenzisa kule meko, yabelana ngeziza ezininzi. Ke iimephu zikaGoogle ziya kukuvumela ukuba wenze uluhlu lweendawo oya kuthi emva koko wabelane nabantu abaliqela ngendlela elula.
Yintoni eya kukuvumela Ncoma kubahlobo bakho ukuba batyelele kwisixeko esithile. Kananjalo ukuba kuya kufuneka wenze izicwangciso kunye nabahlobo, bonisa izinto oza kukhetha kuzo ngobo busuku kwaye ukhethe indawo yokutyela ekufaneleyo, enokuthi ivotelwe ngabantu. Ngaphandle kwamathandabuzo, umsebenzi kwiiMaphu zikaGoogle ezinokusetyenziswa kakhulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungabelana njani ngeesayithi kwiimephu zikaGoogle
Ukuvuza okungakumbi malunga neHuawei P30 kunye neP30 Pro elandelayo
Amaqhinga amahlanu okwenza iTelegram yakho ngokwezifiso kwi-Android